Mee 2021: Ihe oma, ndi ojoo na ihe na-adighi nma nke Software efu | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 30/05/2021 06:00 | GNU / Linux
N'ụbọchị taa nke ike 2021, dị ka ọ dị na mbụ na njedebe nke ọnwa ọ bụla, anyị na-ewetara gị obere a nchikota, nke ụfọdụ n'ime ihe kachasị agba akwụkwọ nke oge ahụ.
Ka ha nwee ike nyochaa (lee, gụọ ma kesaa) ụfọdụ nke kachasị mma na nke dị mkpa ozi, ozi, nkuzi, ntuziaka, ntuziaka na mwepụta, ma nke anyị ma nke ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na ya, dị ka Ntọala ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ (FSF), Isi mmalite Open Initiative (OSI) na webụ DistroWatch.
Na nke a Nchịkọta ọnwa, anyị na-atụ anya ka ọ na-adị, na-enye aka a bara uru obere ájá maka ndị niile na - agụ akwụkwọ anyị, ka ha nwee ike ịdebe ihe ọhụụ site n’akwụkwọ anyị ndị metụtara ya Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux, na mpaghara ndị ọzọ metụtara akụkọ banyere teknụzụ.
1 Nchịkọta nke Mee 2021
1.1.2 Ọ dị njọ
1.1.4 Ihe ndị ọzọ akwadoro nke May 2021
1.2.1 Mee 2021 GNU / Linux Distros a napụtara dị ka DistroWatch si kwuo
Na nchikota nke ike 2021
Ndị ọzọ na-atụ aro posts si ike 2021
Firmware na Driver na Linux: Otu ntakịrị ihe gbasara ihe 2 a. (Ver)
Nyochaa emechara maka akara niile nke Mahadum Minnesota nyefere. (Ver)
Google ga - eme ka nyocha abụọ dị na ndabara maka onye ọ bụla. (Ver)
A New York ụgwọ na-ezube ịkwụsị nwa oge bitcoin mining. (Ver)
Ahịa na Cointop: 2 GUI na CLI ngwa iji nyochaa Cryptocurrencies. (Ver)
BINANCE: Etu esi etinye Binite Desktọpụ App na Linux?. (Ver)
Desktọpụ Cryptowatch: Ngwa iji nyochaa ahịa crypto zuru ụwa ọnụ. (Ver)
1Password, njikwa okwuntughe nke na-eche na Linux. (Ver)
Akara mmuke: nke kacha mma ndị ọzọ na oghere ihe a. (Ver)
Mee 2021 GNU / Linux Distros a napụtara dị ka DistroWatch si kwuo
Nbudata Linux 8.4: 2021-05-27
Server Univention nke Akaụntụ 5.0-0: 2021-05-26
Ndụ 3.8.20 (Beta): 2021-05-19
Nweke Linux 999.210517.0: 2021-05-17
Ime Anwansi 2021_05_12: 2021-05-12
Linux 6.0.0 Bodhi Linux: 2021-05-12
Usoro Guix 1.3.0: 2021-05-12
Gbanyere ndụ 1.3.0-1: 2021-05-05
OpenIndiana 2021.04. XNUMX: 2021-05-01
Isi OS 6.0 Beta: 2021-05-01
Nkume Linux 8.3 RC1: 2021-05-01
Mepee OpenBSD 6.9: 2021-05-01
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere nke ọ bụla n'ime ndị a na ndị ọzọ, pịa ihe ndị a njikọ.
27-05-2021 - ụdị 11 nke nchịkọta GNU maka ọnwa Mee: Kedu nke gụnyere chess-6.2.8, freeipmi-1.6.8, gcc-8.5.0, guile-3.0.7, guix-1.3.0, less-581.2, libidn-1.37, libtasn1-4.17.0, osip2 -5.2.1 .20210522, ukem-2.6.2 na zile-XNUMX. (Ver)
27-05-2021 - Na-emechi ọrụ m na FSF, yana ndọtị BTCPay: Onye otu FSF Kofi Oghenerukevwe (Rukky) emechaala ọrụ ya na FSF, n'oge ahụ ọ jisiri ike wuo, nwalee ma bipụta ndọtị CiviCRM nke ga-enyere FSF aka ịnata ego Bitcoin na Litecoin na ikpo okwu ya site na ijikọta ya na onwe ya kwadoro sava BTCPay. (Ver)
05-05-2021 - Lelee ma kesaa okwu LibrePlanet 2021: Nye ndị ọrụ ike: Anyị na-arịọ mgbaghara maka igbu oge n'ịdebe vidiyo LibrePlanet 2021 ka anyị na-agba ọsọ na ụfọdụ nsogbu na-atụghị anya ya ozugbo ihe omume ahụ gasịrị. Ma ha anọworị ebe a. Anyị nwere nnukwu obi ụtọ maka nzukọ ụbọchị abụọ ahụ, nke gosipụtara mbọ nke obodo sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, yana okwu sitere na teknụzụ na ntụgharị uche nke onwe na mmemme. (Ver)
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere nke ọ bụla n'ime akụkọ ndị a na ndị ọzọ, pịa ihe ndị a njikọ.
Enweghị ozi gọọmentị maka oge ahụ nke May 2021.
Iji mụtakwuo banyere akụkọ banyere ụbọchị ndị gara aga, pịa ihe ndị a njikọ.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-atụ anya nke a "nchikota bara uru" na isi n'ime na n'èzí blog «DesdeLinux» maka ọnwa nke «mayo» site n’afọ 2021, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mee 2021: Ihe oma, ihe ojoo na ihe na-adighi nma nke Software efu